Anjalo amahhotela kaCristiano Ronaldo asePortugal | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Indawo yokuhlala, Portugal
Ibhola likanobhutshuzwayo ngumdlalo osuphenduke into eyenzeka emhlabeni wonke ngezigidigidi zabalandeli emhlabeni jikelele. Amakilabhu nabadlali bebhola lezinyawo bavusa inkanuko enkulu phakathi kwabalandeli, ngakho-ke akumangazi ukuthi amahhotela anezindikimba anikezelwe lo mdlalo omuhle avuliwe.
Ukuhlonishwa kwebhola e-Argentina kuyaziwa. Ngalesi sizathu, bekungeke kube enye indawo lapho kwethulwe khona ihhotela lokuqala elinetimu yebhola elinikezelwe iBoca Juniors. Isikhungo sezinkanyezi ezinhlanu esihlome ngakho konke ukunethezeka nezinzuzo ezikhethekile zezivakashi zaso, njengemihlangano nabadlali, ukuvakashelwa okuqondisiwe emnyuziyamu waseBoca Juniors noma ukufinyelela okukhethekile ngezikhathi zokuqeqeshwa kwethimba.
Muva nje Inkanyezi yalo mdlalo ijoyine lo mkhuba futhi ivule amahhotela amaningana lapho konke kugxile kwezemidlalo, impilo enempilo kanye nesimo sayo: uCristiano Ronaldo.
Amahhotela e-CR7 angumphumela wobumbano phakathi kwenkanyezi yasePutukezi nePestana Hotels & Resorts Group, ebhekele ukuphathwa kokusebenza kwalezi zakhiwo. Iphrofayili yeklayenti lamahhotela kaCristiano Ronaldo ngabantu abasha abaphakathi kweminyaka eyi-18 nengama-35 abanentshisekelo kwezobuchwepheshe, impilo enempilo nempilo yezenhlalo.
4 ENew York
5 Intengo emahhotela e-CR7
Ihhotela lezitolo elinamakamelo acishe abe ngamashumi ayisishiyagalombili kanye ne-suite ye-deluxe esenkabeni yedolobha, amamitha ambalwa ukusuka embonakalisweni wePraça do Comércio, endaweni eye yawela esimweni sokuncipha eminyakeni yamuva. NgePestana CR7 Lisboa Lifestyle Hotels namanye amaphrojekthi wokungenisa izihambi, inhloso ukuthola kabusha iBaixa futhi siyenze izalwe kabusha.
Umhlobiso wamakamelo uyasebenza futhi ubuncane kodwa izinkomba zemidlalo ziyaqhubeka. Hhayi kuphela ngomuntu okhona kuyo yonke indawo kaCristiano Ronaldo kepha nangokuba khona kwezingqwembe zokuvuna ubuqhawe ekwamukelweni kwehhotela, amatafula e-foosball endaweni yokwamukela izivakashi noma izikrini ezinkulu kubha ukuze ungaphuthelwa umdlalo.
Ngaphezu kwalokho, i-Pestana CR7 Lisboa Lifestyle Hotels ine-automation system evumela ukuthi ulawule ukukhanya noma ukushisa kwegumbi kunoma iyiphi idivayisi yedijithali, ukhethe umculo noma ushintshe uhlelo lwethelevishini.
Futhi ehhotela elikhuthaza impilo enempilo, awukwazi ukuphuthelwa yindawo yokuzivocavoca lapho amakhasimende angakwazi ukuzivocavoca futhi athuthukise isimo sawo somzimba ngenxa yokunakwa komuntu okunikezwa yihhotela. ngezinhlelo zokuzivocavoca ezifanele umuntu ngamunye.
NgoJulayi, ihhotela lokuqala likaCristiano Ronaldo laqala ukusebenza ePortugal, ikakhulukazi eMadeira, isiqhingi azalelwa kuso.
Igama lalo yiPestana CR7 Funchal ngoba itholakala enhlokodolobha yaseMadeira esakhiweni esibizayo esibomvu esibheke olwandle esinechibi lokubhukuda, i-spa, ukufinyelela mahhala kwiCR7 Museum of Funchal kanye nokwenzeka kokusebenzisa uhlelo olukhethekile lokuqeqesha ejimini yalo yangaphandle eyenzelwe umdlali webhola uqobo.
Ngaphakathi kwePestana CR7 Funchal kunezigaba ezintathu zamagumbi ahlanganisa ukwakheka kwanamuhla nezemidlalo. Banazo zonke izinhlobo zokunethezeka, bavinjelwe umsindo futhi batholakala ngokwedijithali ngomhubhe wotshani wokuzikhumbuza okhumbuza inkundla yezemidlalo yebhola. Emnyango ngamunye kunesithombe esikhulu sikaRonaldo kanti nasemakamelweni okulala kunemidwebo yempilo yakhe.
Ngaphezu kwalokho, izivakashi zinendawo yokungena ithala elisophahleni lwehhotela, enikeza ukubukwa okumangazayo kweFunchal, itheku layo kanye nolwandle.
Ngokungafani nehhotela iPestana CR7 eFunchal, ihhotela lebhola elihlela ukulivula eMadrid ngeke ligxile kakhulu esibalweni sakhe kodwa emhlabeni wezemidlalo. Izobonakala uqobo lwayo ngaphakathi kwalolu chungechunge lwePestana chain kanye nethala lophahla kanye nezakhiwo zomlando zesakhiwo saseGran Vía lapho behlela ukuthola khona ihhotela kuzobaluleka kakhulu.
Njengokulangazelela, umqondo bekuwukuthi kuvulwe ihhotela lokuqala i-CR7 eMadrid, kepha ngenxa yobunzima obuthile basemadolobheni nokubambezeleka kwezomthetho, ukuvulwa kwesikhungo enhlokodolobha yaseSpain bekufanele kuhlehliswe.
Futhi ngonyaka ozayo, uchungechunge lwamahhotela alo luzophinde lungene enkabeni yeTimes Square yaseNew York, yize imininingwane emincane seyenzekile mayelana nale phrojekthi.
Intengo emahhotela e-CR7
Amanani aphakathi kuka-250 no-1.250 euros ubusuku ngabunye kuya ngegumbi. Zingabonakala njengezintengo eziphakeme kodwa lawa ngamahhotela ezinkanyezi ezi-5 afakwe zonke izinhlobo zokunethezeka nobuchwepheshe bamuva. Kodwa-ke, kukhona labo abangabaze ukuthi kunentsha eningi engakwazi ukukhokha lezi zintengo lapho ijwayele ukukhetha ezokuvakasha ezingabizi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Portugal » Lawa ngamahhotela kaCristiano Ronaldo ePortugal
Izinto okufanele uzenze eBelfast